Madaxwayne Cabdi oo ka Garaabay Garta Beesha Ciise Gudbisay. – Rasaasa News
Apr 2, 2014 ciise, degaanka, somalida, Somaliland
Jijiga, Apr 2, 2014 – Madaxwayne dawlada degaanka Somalida Cabdi Maxamud Cumar iyo wafti heer federal ah ayaa gabalka Shiniile ku jooga socdaal dheer oo qaatay muddo dhawr maalmood ah.
Madaxwaynaha ayaa intii uu joogo gabalka Shiniile, u kuurgalaya nolosha shacabka iyo mashaariicda ka socda gabalka Shiniile. Waxayna kortageen mashruuca ceelasha biyaha, mashruuca jidka tareenka iyo waliba mashruuca biyo siinta dalka Jabuuti.
Socdaalka Madaxwayne Cabdi Maxamuud Cumar, ayaa yimid ka dib kolkii ay cabsho xoog leh kaga timid dhinaca waxgaradka beesha Ciise. Odayaasha ayaa dacwada gaadhsiiyey dawlada federalka ah iyaga oo kaga cawday Madaxwaynaha in uu idhaha ka lalinayo.
Beesha Ciise waxay ahaan jirtay beesha labaad degaanka Somalida Atobiya, waxayna si gaar ah u leedahay gabalka Shiniile oo ka kooban todoba dagmo.
Cabashooyinka beesha waxaa ugu badnaa in madaxda degaanku ay si gaar ah u ixtiraamto beesha Isaaq oo leh labo degmo oo mid hada la sameeyey. Waxaa nasiib daro ah in madaxda degaanka Somalidu ayna la socon taariikhda degaanka. Odayaashu waxay sheegeen in booskii ay beeshu ku lahayd ee degaanka ay gashay beesha Isaaq, taasina ay tahay cadaalad daro.
Beesha Ciise waxay ku andacootay, in madaxda degaanka uu culays kaga yimid dhinaca maamulka Somaliland, culayskaas oo ilowsiiyey madaxda degaanka xaqa beelaha kale.
Beesha Isaaq oo degaanka ku leh labo degmo, waxay helaan miisaaniyada ugu badan iyo daryeelka ugu badan waana sababta uu madaxwaynaha degaanku booqasho ugu tagay saddex goor meesha uu gabalka Shiniile hal mar tagay.
Marka runta laga hadlo ee la beela beeleeyo degaanka Somalida, sida gumaysigu jecel yahay, beesha Isaaq waxay kaga jirtaa kaalinka 5aad dhinga degmooyinka, beesha Ciise kaalinka 2aad, beesha Harti kaalinka 3aad, kaalinta afraadna waxaa ku jira beesha Hawiye. Sida aan xogta ku hayno.
Waxaan aragnaa had iyo goor in Beesha Isaaq ay muujiso in ay tahay beesha labaad ee degaanka Somalida. Arintaas oo aan sax ahayn, Somalidu waxay tidhaa “nin hadal badan hortaa dharag,” oo micnaheedu yahay ninmaan xishoon waa la iska aamusiiyaa.
Eeda beesha Ciise waa daw, waxaana taa muujinaysa mudada uu socdaalka ku joogo madaxwaye Cabdi Cumar degmooyinka gabalka Shiniile oo ah gabal aad u balaadhan. Runtiina waxaa ka socda gabalka Shiniile mashaariicda ugu waawayne ee ka jira guud ahaan degaanka.
Laakiin waxaa nasiib daro ah in madaxda degaanku ayna wali dareemin, maamulka beesha Somaliland oo ah dhibaatada dalka Somaliya, in uu haatan kula soo galgalanayaan dhbaato degaanka Somalida Atobiya, isaga oo maamulka Somaliland fuuqsanaya dhaqaalaha degaanka, dabna sudhay shacabka degaanka.
Ethiopian housemaid serves lunch… spiced with crushed glass